सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य सुरक्षा पालना होओस् | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : ८ आश्विन २०७७, बिहीबार १५:२५
अहिले कोरोना त्रासका बीच सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन भएको छ । सरकारसंग सल्लाह नै नगरी यातायात व्यवसायीहरुले असोज १ गतेदेखि यातायात सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका हुन् । घोषणपछि बल्ल छलफल र समन्वय भएको थियो ।
व्यवसायीले सेवा सञ्चालन गर्ने दिशामा कदम अघि बढाएपछि सरकारले पनि लामो तथा छोटो दुरीको सवारी साधन चलाउन दिने निणर्य गर्‍यो । सोही कदमपछि गत असोज १ गतेदेखि लामो तथा छोटो दुरीको सार्वजनिक सवारीसाधन चल्न थालेका छन् ।
सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनका लागि सरकारले बिभिन्न स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न निर्देशन गरेको छ । जसमा गाडीभित्र वा गाडी चढ्ने क्रममा भौतिक दुरी कायम गर्नुपर्ने वुँदा जोडदार छ । त्यस्तै गाडीभित्र मास्क लगाउन अनिबार्य गरिएको छ । एउटा सिटमा एकजना मात्र यात्रु राख्ने तर भाडा ५० प्रतिशत बढि तिर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
तर गोरखाका ग्रामीण क्षेत्रमा चल्ने सार्वजनिक यातायातका साधनमा उपरोक्त मापदण्ड पालना भएको पाइदैन । एक सिट एक यात्रु त परको कुरा, बिगतमा झैँ गल्लीमा पनि पाइला राख्ने ठाउँ नपाउने गरी कोचाकोच गरेर यात्रु चढाइन्छ । पर्याप्त सवारी साधन नपाएपछि यात्रु कोचाकोच गरेर भए पनि गाडी नचढी साध्यै छैन ।
मास्क पनि बसभित्र उपलब्ध त हुन्छ, तर १० रुपैयाँको मास्कलाई सतप्रतिशत मूल्य बढि मूल्य तिरेर २० रुपैयाँमा किन्नु पर्ने अबस्था छ । त्यसैले यी तमाम अबस्थाको अनुगमन गरी सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूणर् रुपमा पालना होओस् ।
धर्मशालामा गेष्ट हाउस नचलोस्
मनकामना देश, विदेशमा प्रसिद्ध मन्दिर हो । यहाँ देश, विदेशबाट तीर्थालु, भक्तजनहरु पूजा, आराधना गर्नका
बिगत बर्षमा यतिबेलासम्म सडक मर्मतसम्भार भइसक्थ्यो । गाउँका सडकहरुमा पनि राजमार्गमा झै सररर चारपाङ्ग्रे, दुईपाङ्ग्रे